Calaamadaha Lagu Garto Wiilka Ku Caashaqay - Daryeel Magazine
Calaamadaha Lagu Garto Wiilka Ku Caashaqay
Gabdho badan waxay rabaan inay ogaadaan wiilka ay xiriirka la bilaabeen dareenkiisa iyo inuu ka helay oo jaceyl ku bilowday, hadaba daryeelmagazine.com ayaa ku siinaysa calaamado aad ku garan karto wiil aad la sheekaysato inaad qalbigiisa dagtay.
Nimanku ma jecla in durba lo ogaado sirtooda jaceyl waxayna ka helaan inay iyaga un ku koobnaato laakiin qurbo ayaa sirta ku siinaysa gabaryahay calaamadahaan fiiro gaar u yeelo.
-Fariimo waali ah: Haduu kusoo diro fariimo aad u badan oo wax kasta oo uu arko uu kusoo sheego tani waa calaamad ku tusinaysa jaceylka bilowga ah.
-Mar kasta wuu kusoo wacaa: hadii uu si joogto ah uu kusoo waco oo taleefoonkiisa uusan kala joogsi lahayn tani waxay ku tusinaysaa inuu aad ku xiisaynayo.
-Wuxuu ka codsadaa inaad labiska u saxdo: waxaa laga yabaa inuu kala tashto labiska uu xiranayo iyo sida uu ku yahay inuu ku weydiiyo tusaale ahaan inuu ku yiraahdo, “Kabahaan iyo surwaalkaan ma isku fiicanyahiin”? hadaad calaamadaan ku aragto ogoow adiga ayuu kasoo qaaday muraayadiisa.
-Hiyi kac: durba wuu hiyi kacaa marka la soo hadal qaado arrimo adi kugu saabsan hadii wax xumaan lagaa sheego wuu xanaaqayaa hadii wax wanaagsan laga sheegayana wuu u bogayaa.
-Xiiso gaar ah: hadii uu mar walbo xiiso gaar ah u hayo kulankiina, waa calaamad cad uu ku muujinaysaa inuu ku jecelyahay.
Calaamadaha Lagu Garto Qofka Ku Neceb 10 Calaamadood Oo Lagu Garto Haddii Qofka Aad Jeceshahay Aanu Wax Xiiso Ah Kuu Hayn Sababaha Keena Qawadka Iyo Calaamadaha Lagu Garto Calaamadaha Lagu Garto Haduu Jidhkaagu Sumaysan Yahay & Sida Sunta Jidhka Looga Saaro